Orinasa Tokyo Sangyo : Hampiasa vola 130 miliara Yen eto Madagasikara -
AccueilSosialyOrinasa Tokyo Sangyo : Hampiasa vola 130 miliara Yen eto Madagasikara
Orinasa Tokyo Sangyo : Hampiasa vola 130 miliara Yen eto Madagasikara
11/10/2018 admintriatra Sosialy 0
Tafapetraka eto Madagasikara ny birao maharitra ny orinasa Tokyo Sangyo izay hisehatra eo amin’ny famokarana angovo, famokarana milina izay ho ampiasaina amin’ny fambolena sy famokarana glace izay ho ampiasaina eo amin’ny sehatra ny jono. Anisan’ny mandray anjara amin’ny fanitarana ny seranatsambon’i Toamasina ihany ny orinasa Tokyo Sangyo ary kamiao lehibe miisa 200 sy fitaovana maro samihafa no efa natolotra amin’ny fanantanterahana ny asa fanitarana. Vola mitentina 130 miliara Yen hampiasaina ity orinasa ity eto amintsika. Heverina fa hitondra tombontsoa ho an’i Madagasikara eo amin’ny tontolo ara-toekarena ny fahatongavan’ny orinasa sy ny fametrahana ny birao maharitra izay hita ao Toamasina. « Vonona izahay hitondra ny anjara birikinay amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara izay mifototra amin’ny teknolojia niorina efa ela tany Japana, sy ny finoantsika amin’ny fitokisana sy ny fandraisana anjara. Tena niavaka ny fampandrosoana ara-toe-karena ny Madagasikara tao anatin’izay taona faramparany izay. Amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa amin’ny vahoaka malagasy, te-hanao fanamby eo amin’ny sehatra ny angovo, fambolena sy jono ary fanajariana ny tany ny orinasa Tokyo Sangyo », hoy ny filoha sady tale jeneralin’ny orinasa Tokyo Sangyo, Toshio Satomi. Efa nahitana fihatsarana ny tontolon’ny toe-karena eto Madagasikara. Efa manomboka miha-maro ihany koa ireo mpandraharaha vahiny tonga eto, anisan’izany ny avy any Japana, hoy kosa ny masoivoho ny japana, Ichiro Ogasawara.
Zava-dehibe izao fipetrahanan’ny orinasa japoney eto amintsika izao, hoy ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny EDBM satria mariky ny fanamafisana ny fifandraisana ara toe-karena sy ara-barotra eo amin’ny Fanjakana Malagasy sy japoney. Marika mampiseho ihany koa ny vokatry ny fiaraha-miasa aman-taonany eo amin’ny EDBM sy ny masoivohon’i Japana eto Madagasikara. Efa tamin’ny taona 1963 no nanasonia fifanarahana ara-barotra ny firenena roa tonta, ary nihamafy hatrany izany teo amin’ny lafiny fampandrosoana ara toe-karena sy sosialy. Raha ny lafiny ara-toekarena sy ara-barotra no dinihina manokana dia mpiara miombon’antoka lehibe ho an’i Madagasikara i Japana. Izy no faha telo amin’ny fampiasambola vahiny na stock d’IDE amin’ny fiteny baiko, izy ihany koa no tsena faha dimy ho an’ny vokatra fanondrana malagasy, ary tafiakatra 98 tapitrisa dolara amerikana ny sandan’ny fanondranana entana malagasy nankany Japana tamin’ny taona 2017. Mitohy ny ezaka hampitombo hatrany io vokatra io. « Anisan’ny fiaraha miasanay roa tonta ohatra ny lafiny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana izay vatsian’ny masoivoho japoney vola ka tato anatin’ny telo taona dia mihoatra ny 20 ny fanavaozana vita izay niarahana nisalahy tamin’ireo mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena isan-karazany ary ireo minisitera sy vondrona tsy miankina maro. Ireo ezaka fanatsarana ireo dia nahafahan’i Madagasikara nanatsara hatrany ny tontolon’ny fandraharahana. Ao ihany koa ny vokatra azo tsapain-tànana eo amin’ny lafin’ny fampiroboroboana ny fampiasambola vahiny sy eto an-toerana satria nisy ny hetsika ara-barotra izay natao tany Japana tamin’ny desambra 2017 nokarakarain’ny EDBM sy ny JETRO ary notohanan’ny masoivohon’i Japana eto Madagasikara », hoy i Razanahaholy Lisivololona, talen’ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina.
Bolongam-bolamena miisa efatra, milanja 3,600 kilao no tra-tehaka teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 02 ora sy sasany antoandro. Nokasaina lehilahy izay teratany malagasy haondrana an-tsokosoko tany ivelany ireto volamena ...Tohiny